Oromo Free Speech: WBOn Haleellaa Isaa Itti Fufuun Tarkaanfii Jabeesse
Gama biraan humni addaa WBO Harargee Dhihaa Ebla 25, 2013 naannoo Mulluu fi Mi'eessoo gidduu bakka Ciqirtii jedhamutti humna mootummaan Wayyaanee waraana isaa keessaa kanneen Afaan Somaalee dubbatan filuudhaan ummata Oromoo hidhannoo hiikkachiisuuf bobbaaftee turte irratti lola bane tokko irraa ajjeesuun kanneen lakkoobsi hin beekamne madeessuun akeeka ummata Oromoo hidhannoo hiikkachiisuu naannoo kanaa fashalsee jira. Mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa kana ummata Oromoo meeshaa isaa hiikkachiisuu karooraan qabattee bal'inaan kan itti jirtu tahuu ajajni WBO Godinaa Harargee Dhihaa hubachiisa.
Humni addaa WBO Godina Wallagga Bahaa keessa sosso'u humna diinaa haxxee hidhuun WBO eeggataa ture duuba irraan marsee haleeluun loltoota 8 kan ajajaan humnichaa Baqqalaa Yohannis jedhamu keessatti argamu battalumatti ajjeesuun hedduu madeessuu ajaji WBO Godinaa Baha Wallaggaa beeksise. Tarkaanfiin Ebla 27, 2013 humna addaa WBO Abdii ummataan diina irratti fudhatame kun Godina Baha Wallaggaa bakka Darbaa bishaan Dhidheessaa jedhamee beekamutii tahuu kan hubachiise ajajni WBO Godinichaa bakki lolaa kun bakka Godinaaleen Bahaa fi Dhiha Wallaggaa akkasumas Bulochiinsi naannoo Benishangul itti wal daangeessan tahuu dabalee hubachiisee jira.
Posted by Oromo firee speech at 12:52 PM